Madaxweyne Gaas oo Xabsiga ka sii daayay Saraakiil Shabaab ah oo u ku Jiro Horjooge Caan ah Iyo Taliye Kashifay | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Madaxweyne Gaas oo Xabsiga ka sii daayay Saraakiil Shabaab ah oo u...
Madaxweyne Gaas oo Xabsiga ka sii daayay Saraakiil Shabaab ah oo u ku Jiro Horjooge Caan ah Iyo Taliye Kashifay
Agaasimihii hore hay’adda sirdoonka PIA Puntland Cabdi Xuseen Xasan (Cabdi yare) ayaa ku eedeeyay madaxweynaha maamulka Puntland Dr C/wali maxamed Cali (Gaas) In uu sii daayey xubno 60-ka badan oo Al-shabaab ah Sanadkii 2014-kii.
Cabdi yare oo waraysi uu siiyey laanta afka Soomaliga ee VOA-da ayaa ka hadlay qabashada C/risaaq xuseen tahliil oo dowladda Mareynka ay sheegtay in u ka Tirsan yahay Xarakada Al-shabaab, oo dhawaan ciidamada Puntland iyo Galmudug oo gacan ka helaya maraykan ay gaalkacyo Ku qabteen.
Waxa uu sheegay in uu ka mid ayaa xubnaha shabaabka ah madaxwayne C/wali Maxamed Cali (Gaas) sii daayey sanadkii 2014-kii isagoo beeniyey in xiligaasi loo sii daayey arimo qabiil iyo dad awgiis loo afduubtay waxuuna tilmaamay in uu ka mid ahaa 60-xubnood madaxwaynuhu siidaayey uuna soo soo dhawaynayo dib u qabashadiisa.
Dowladda Mareykanka ayaa war kasoo soo saartay todobaadkaan Howlgal Ciidameeda Malatariga ay ka fuliyeen Gudaha Soomaliyeed kaasi oo lagu qabtay shaqsi lagu tuhmaaho in dagalyahanada Xarakada Al-shabaab u qaabilsana sameynta qaraxyadda.
Afhayeen u hadashay ciidamada Milatariga Maraykanka ee Afrika ee (Afrikom) ayaa sheegtay in Cabdirizak Tahlil oo lagu eedeynayo in uu ka caawinayay dagaalyahanada Xarakada Alshabaab sameynta waxyaalaha qarxa ay soo qabteen ciidamada Maamulka Puntland.